Fadeexad wayn Madaxweyne Ku-Xigeenka Maamul Gobolleedka Puntland Oo Cod Sir Ah Laga Duubay
Garoowe(Gebogebonews)-Madaxweyne Ku-xigeenka maamul goboleedka Puntland ayaa laga duubay cod sir ah oo ku saabsan dagaalka Tukaraq iyo qorshaha maamulka Puntland oo u muuqda mid dagaalka ku jabay doonayana rogaal celis beelaysan.
Madaxweyne xigeen Cabdixakiim Camay oo khadka kula hadlaya qurbejoog beeshiisa ah ayaa laga duubay cod tawaawac iyo guubaabo dagaal ah waxaana la soo galiyay baraha bulshadu ku xidhiidho. waxaanu siyaasigan ka soo jeeda gobolka Sool si weyn ugu calaacalaya in qurbejoogto cududooda midayso oo dagaalka abaabusho.
Mr Camay wuxuu sheegaya in khasaare badan ka soo gaadhay dagaalkii dhawaan ka dhacay aagga Tukaraq oo ciidamada Puntland ku soo weerareen ciidamada Qaranka ee Somaliland xuskii 15 May waxaanu ku dooday in ciidanka ugu badan ee halkaas ku baxay ahaa beesha Dhulbahante ee gobolka Sool degta.
Mr Camay ayaa si calaacal ah qurbejoogta uga codsanaya in la mideeyo beesha Dhulbahante si ay dagaal ula gasho ciidamada qaranka ee Somaliland, islamarkaana beeshu arrinsan doonto marka ay xorayso ilaa Laascaanood.
Ma jirto cid hadalka ka soo dhexgalaysa lamana oga in ay dadka uu la hadlayay aragtidan la qabaan laakiin, waxa loo arka in aanay qorshihiisa la dhacsanayn dadka codka ka duubay ee baahiyay. Qofka codka duubay ayaan isagu mar qudha hadal inta duubistu socotay taas oo u muuqata in uu iska dhawrayay in la garto.